Fitantanana fandraisana vahiny mandeha ho azy tanteraka. Momba an'i Zeevou
/ Ziːvuː /
Zeevou dia sehatra an-tserasera mora ampiasaina izay manamboatra ny fitantanana fandraisam-bahiny - manomboka amin'ny marketing, ka hatramin'ny famandrihana, hatramin'ny asa. Soloy ny mpitantana ny fantsonao nentim-paharazana sy ny rafitra fitantanana ny fananana amin'ny foibe miray.
Manolo-tena izahay amin'ny famolavolana sehatra fandraisam-bahiny izay ahafahan'ny mpiray antoka isan-karazany afaka mifandray amin'izy ireo amin'ny fomba mivantana sy mahomby satria mino izahay fa izany dia hitondra anjara biriky amin'ny fanaovana izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa.
Mino olona isika. Raha niforona ny ekipa Zeevou nifantoka tamin'ny fahaizana ara-teknika sy ny traikefa matihanina mifandraika amin'izany, dia tianay ihany koa ny hanome fotoana ireo izay mila azy ireo indrindra. Amin'ny fisafidianana an'i Zeevou dia tsy vitan'ny hoe misafidy vahaolana tsara indrindra ho an'ny orinasanao ianao, fa mampiasa vola amin'ny fivezivezena ara-tsosialy ihany koa. Miara-miasa amin'ireo mpandraharaha amin'ny habe rehetra izahay mba hiantohana ny tompona trano na tompon'andraikitra isan-trano, na inona na inona habeny, dia manana fitaovana ilaina hifaninana amin'ny kianja filalaovana avo lenta ampiasain'ny haitao miavaka.
Ny mpanorina an'i Zeevou, Na'ím Anís Paymán, dia nanao ny fiainany ho amin'ny iraka nampandroso ny sivilizasiona - ary manomboka ny zavatra raha toa somary miadana izy ireo! Taorian'ny nanaovany ny fianarany ambaratonga voalohany tao amin'ny oniversiten'i Cambridge ao amin'ny Siansa voajanahary, dia nanapa-kevitra ny hanitatra ny tombotsoany izy amin'ny alàlan'ny asa aman-draharaha, nitombo orinasa mpanofa trano fohy ho an'ny singa an-jatony ao anatin'ny taona vitsivitsy. Nandritra ny fotoana niatrehany ny vokatr'io fanitarana haingana io no teraka ny hevitra ho an'i Zeevou. Natao ho toy ny fanombohana mahia miaraka amin'ny fifantohana amin'ny haitao sy ny fanavaozana, Zeevou dia mitazona mialoha ny fiolahana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fizotran'ny tena fiainana sy ny heviny hanavao ny endriny sy ny fiasa.
Ao amin'ny Zeevou, manavao izahay.
Ny hevitra dia tsy ny fanalana ny lisitra tolotra mitombo tsy mitsaha-mitombo, fa ny hanomezana ireo fiasa tena tadiavin'ny mpanjifa.
Izay mitarika sy mandrisika antsika ao amin'ny Zeevou dia ny fahitana futuristic ny amin'ny tokony hampiantranoana. Izahay dia mitarika ny fanovana amin'ny alàlan'ny fijerena akaiky ny hevitry ny mpanjifa, fampiharana ireo 'fotoana takamoa-pahazavana' ary manome antoka fa ny traikefa Zeevou dia iray izay mitaona ny mpampiasa hatrany hatrany hatrany.
Ny rafitray dia novolavola tamin'ny alàlan'ny teknolojia farany ary namboarina tamin'ny sasany amin'ireo mpizara matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao hiantohana ny traikefa haingana sy matanjaka ary azo antoka. Raha tsara aminao izany… andao hiaraka aminay!